Kuxwayiswa ngobugebengu ngalamaholidi | News24
Kuxwayiswa ngobugebengu ngalamaholidi
ISITHOMBE: sigciniweuKapteni Khosi Khonjelwayo wasesiteshini samaphoyisa saseMgungundlovu.
“HLALANI nivule amehlo ngaso sonke isikhathi ngoba izigebengu sezihlelile zilindele ukugadla.”
Lona umyalezo ophuma emaphoyiseni asesiteshini saseMgungundlovu njengoba sekuqala ukuphithizela kwesikhathi samaholidi kaKhisimusi kanti nabantu abaningi sebezoqala bahlukanise izimali zabo zezitokufela akade bezidlala unyaka wonke.
Ngokusho kokukhulumela amaphoyisa kulesi siteshi uKapteni Khosi Khonjelwayo uthe kubalulelekile ukuthi abantu bahleli bevule amehlo njalo ngalesi sikhathi ukuze izigebengu zingeke zize zilithole ithuba lokugila imikhuba yazo.
Uthe njengamaphoyisa izindlela izigebengu ezigila ngayo imikhuba ayikakashintshi kanti futhi ingagadla noma ingasiphi isikhathi.
“Kumele abantu baqaphele uma ngabe bephethe isamba esikhulu semali. Izigebengu zasemgwaqeni zithela umuthi ezimpahleni zalowo osuke ephethe imali okanye beze kuyena bezenze amaphoyisa mbumbulu. Ungamnikezi omunye umuntu ongamazi imali kunaloko kumele umemeze ucele usizo.
“Ungavumi ukukhohliswa abantu abakuthembisa imisebenzi eminyangweni kahulumeni bese befuna amantshontsho.
“Laba abadlala izitokfele abona kumele baqinisekise ukuthi uma ngabe beyofaka okanye beyokhipha imali yabo ebhange kumele baqinisekise ukuthi awuhambi wedwa nkodw akukhona ozakwenu abakuphelezelayo.
“Kumele benze isiqiniseko futhi sokuthi izimali zabo bazihlukanisa ezindaweni eziphephile okanye bavele bazi fake emabhange qobo,” kubeka yena.
Uthe uMsombuluko kanye noLwesihlanu kanye nokuphela kwenyanga izona zikhathi eziyingozi kakhulu uma ngabe uyokhipha imali ebhange.
Ezinye izindlela ongavikela ngazo ubugebengu:
• Ungavumi umuntu ongamazi akutshela ngezimpahla zamanani aphansi . Ungazishiyi naye izimpahla zakho.
• Ungadabuli imininingwane yakho yezimali zasebhange bese uyilahla emgqomeni yomphakathi.
• Nakekela umazisi wakho, iminningwane yakho yasebhange kanye nezincwad I zakho zokuhola.
• Ungawuphenduli umyalezo okutshela ukuth I uwine iLotto yase-UK okanye inombolo yakho ewinini, akumele kube khona izimali ozikhokhayo ukuthi uthole umklomelo wakho uma ngabe kade ungenele noma imuphi umncintiswano.
• Sebenzisa umshini wokukhipha imali owujwayele.
• Uma ngabe ukhipha imali, enza imizamo yokuyigcina iyimfihlo. Ungavumeli noma ubani azi ukuthi uzobe uyikhipha kuphi imali.
• Enza isiqiniseko sokuthi akekho umuntu okulandelayo uma ngabe usuka ebhange.
• Qaphela abantu abasolisayo uma ngabe usebhange, uma ngabe uzizwa ungaphephile cela usizo lwamaphoyisa.
• Kuyisu elihle ukuthi imali uyikhiphe ngezinsuku ezihlukene kunokukhipha isamba esikhulu semali ngosuku olulodwa.
• Gwema ukuphatha isamba esikhulu semali okungcono thumela imali ngomakhalekhukhwini.
• Gwema ukukhipha imali ube udle amanzi amponjwana